Hakha-Gangaw Karlak Hmun Pakhat Ah PDF Sakhan Cu SAC Ralhrang Ralkap Nih Kan Laak Cang Tiah An Chim! – Hakha Cherry
Chin ramkulh Hakha-Gangaw karlak kalnak lampi လုံကျွေး khua le လေအွမ်ခ khua pawng iaummi PDF sakhan cu April (1) zinglei sml 9:00 hrawngah kan laak tiah SAC ralhrang ralkap nih hrokhrawl in thawngpang an chuahnak Telegram ah an langhter.
SAC ralhrang ralkap nih an laakmi PDF sakhan ah minung umnak thlam (7), rawl chuannak thlam (1), facang tun (1), cite bag (1) telh in eidin thilri dangdang zong an tel.
ဂန့်ဂေါ-ဟားခါးကြားလမ်းတစ်နေရာက PDF စခန်းကို အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က သိမ်းယူဟုဆို
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ် ဂန့်ဂေါ-ဟားခါးသွားကားလမ်းဘေးက လုံကျွေးကျေးရွာနဲ့ လေအွမ်ခကျေးရွာအနီးက PDF စခန်းတစ်ခုကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်က ယနေ့ ဧပြီ ၁ ရက် မနက် ၉ နာရီခွဲလောက်က သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram ချာနယ်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်သိမ်းယူတဲ့ PDF စခန်းမှာ လူနေတဲ ၇ လုံး၊ မီးဖိုဆောင်တဲ ၁ လုံး၊ ဆန် ၁ အိတ်၊ ပဲ(ပြည်) ၁၀ ပြည်၊ ဆား ၁ အိတ်၊ ကျောက်ဖရုံသီး ၁၅ လုံး၊ ဒန်အိုး ၄ လုံး၊ မိုးပြဲဒယ်အိုး ၁ လုံး၊ မီးစက်(လက်ဆွဲ)အသေး ၂ လုံး၊ ဘက္ထရီအိုး(၁၀၀ ဗို) ၁ လုံး၊ အင်ဗာတာ(၃၀၀ ဝပ်) ၁ လုံး၊ NUG တံဆိပ်ပါ (၅ ပေ ၃ ပေ )ရှိ အလံ ၁ ထည်နဲ့အတူ ဆက်စပ်ပစ္စည်း များ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ The Federal Times Crd: Zalen